Waaheen Media Group » Magaalada Lascaanood iyo Horumarka ay gaadhay sanadkii tagay ee 2015 Daawo Sawiro
Browse:Home Videos Magaalada Lascaanood iyo Horumarka ay gaadhay sanadkii tagay ee 2015 Daawo Sawiro
Magaalada Lascaanood iyo Horumarka ay gaadhay sanadkii tagay ee 2015 Daawo Sawiro
Published by Waaheen Media on January 3, 2016 | Comments Off on Magaalada Lascaanood iyo Horumarka ay gaadhay sanadkii tagay ee 2015 Daawo Sawiro
Laascaanood,3Jan,2016(Waaheen)-Sannadkii hore ee 2015 waxaa la oran karaa magaalada Laascaanood waxaa laga hirgeliyay mashaariic fara badan, kuwaasoo aan laga hirgelin wax ka badan rubuc qarni, kuwaas oo isugu jira dhinacyada bilicda magaalada oo ah midda ugu muhiimsan, waxbarashadda iyo weliba arrimo kale oo dhinaca bulshda ah.
WADDOOYINKA LAAMIGA AH;
Magaaladda Laascaanood waxaa laga billaabay mar keliya waddo dheer oo kala barta inta badan magaalada; taasoo laga soo billaabay Isbitaalka Laascaanood oo ahayd halka ugu darran ee dadka dibaatadu ku qabeen illaa dhanka Koonfur galbeed ee magaalada, taasoo gaadhay ku dhawaad 5-km.
Billowgii waddadan saameyn badan ayay ku lahayd bulshada Laascaanood ku nool, Qaar riyo ayay ula muuqatay, qaarna waxayba kasoo horjeedeen in la dhiso, iyadoo ay saameyn ku yeelanaysay dhismayaal ay ka dhisteen goobihii ay waddadu mari lahayd.
Muddo dheer kaddib, muran iyo is-qabsi meeshii la marin lahaa waddada waxaa billowgii bishii Abriil ee 2015-ka, uu isbeddel ku yimid golihii deegaanka; iyadoo xilka loo doortay Cismaan Saleebaan, isla 14-kii bishaas ayaa si lama filaana loo billaabay dhismaha jidkan; iyadoo xoog lagu baabi’iyay boqolaal guri iyo kumannaan waabo ganacsi ahaa.
Dhismaha waddadan waxay sahashey dhawr mashruuc oo kale oo iyagana ahaa waddooyin cusub oo dhismahooda magaalada laga billaabay; kuwaasoo qaar ka mid ah ay billaabmeen bishii May ee sannadkii hore, halka kuwa kalena ay soo dhamaadeen bishii December ee 2015-kii.
Sidoo kale, magaaladda Laascaanood waxaa laga hir-geliyay sanadkii tagay afar waddo oo dhamaantood lasoo gaba-gabeeyay; Haatanna Gaadiidku ay si caadi ah u maraan, inkastoo qaarkood hadhaadigii raadkii burburka uu ka sii muuqdo.
Dhaqaalaha lagu dhisay waddooyinkan ayaa waxaa ku deeqay dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin hay’adda DDG, Sanduuqa SDF, ganacsato iyo sidoo kale shirkadda is-gaadh-siinta ee TELESOM.
Garoonka diyaaradaha ee goli-yeedhay ayaa waxaa laga billaabay dhismaha Waddada ay diyaaraduhu ku caraaraan, taasoo ay dhismihiisa wadaan ganacsato Soomaaliyeed oo aan ka xusi karro Maxamed Jabuutaawi.
Dhinaca waxbarashada ayaa ka mid ah meelaha lagu xusuunsan doono sannadkii tagay ee 2015-ka, iyadoo ay soo kordheen goobo waxbarasho oo kala duwan; sida heerka koowaad, kan dhexe iyo kan sare.
Laascaanood waxay lahayd hal Jaamacad oo lagu magcaabo NUGAAL taasoo hadda kusii siqaysa inay 15-sano, iyadoo ay kasoo bexeen dadka degmada Laascaanood iyo guud ahaa gobolka ka shaqeeya.
Bishii September, 2015-kii ayaa laga Hir-galiyey laba Jaamacadood, kuwaasoo markiiba helay baahidii ardayeed ee ay rabeen ama ku dhaw; iyadoo aanay is-dhimin ardaydii wax ka baranaysay Jaamacaddii hore ee NUGAAL.
Jaamacadda GOLIS oo ahayd mid horay u jirtay xarunteeduna ahayd Hargeysa ayaa 01-dii Sep 2015-kii, ka furatay magaalada Laascaanood xarun, waxaana isugu yimid furitankeedii bahda waxbarasha oo sheegay inay soo kordhay tartan aqooneedka waxbarashada sare ah.
Dhanka kale, Jaamacadda Umamdda ILLAYS ayaa iyana 12-kii bishii September ee 2015 xarun ka furatay Laasaanood, taasoo ah mid waxbarashada billowday, waxayna leedahay Dugsiyo aad u badan oo deegaanno kala duwan ka furan laguna magcaabo Dalladda Wax-barshada ee ILLAYS, taasoo wax weyn ka taraysa sii socodka howlaha Jaamacadda.
Magaalada Laascaanood waxaa laga hir-geliyay xarun lagu xanaaneeyo dadka dhimirka la’ oo wax weyn ka tartay in boqollaal dad ah oo aan daryeel haysan ay helaan isbitaalo lagula tacaalo caafimaadkooda.
Ugu dambeyntii, iyadoo aanan qormadan kusoo koobi karin koboca dhinaca horumarka ah ee Laascaanood ku taallaabsatay sannadkii lasoo dhaafay oo qayb ay ka yihiin ganacsiyada oo qurba-joog soo laabtay ay maal-gashiyo ku sameysteen. Waxaana Sannadka haatan Curtay la sugayaa wuxuu kusoo kordhiyo magaalada Laascaanood.